के साच्चैँ नै आँखा फरफराउनु शुभ र अशुभ हुन्छ ? जान्नुहोस् यस्तो छ कारण – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / के साच्चैँ नै आँखा फरफराउनु शुभ र अशुभ हुन्छ ? जान्नुहोस् यस्तो छ कारण
के साच्चैँ नै आँखा फरफराउनु शुभ र अशुभ हुन्छ ? जान्नुहोस् यस्तो छ कारण
admin October 23, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 80 Views
यी हुन् ओ’मिक्रोनका प्रमुख लक्षण, यस्तो देखिए तुरुन्त परीक्षण गर्नुहोस्
आँखा फरफरायो भने कुनै घटना वा खबर प्राप्तिको संकेत हो भन्ने विश्वास हाम्रो समाजमा गरिन्छ । आँखाको फरफराई पनि महिला र पुरुषमा अलग–अलग तरिकाले विश्वास गरिन्छ। कुनै समाजमा पुरुषमा दाहिने आँखा फरफरायो भने शुभ समाचारको सूचक मानिन्छ भने देब्रे आँखा फरफरायो भने अशुभ समाचारको सूचक मान्ने गरिन्छ । महिलामा भने देब्रे आँखा फरफरायो भने अशुभ समाचारको सूचकका रुपमा लिने गरिन्छ।
तर, यो पूर्णत वैज्ञानिक कारणसंग जोडिएको कुरा हो । यसमा आँखाको परेला फरफराउँछ। यो फरफराई केही सेकेण्डसम्म या केही घण्टासम्म जारी रहन्छ । कसै कसैमा हप्तौंसम्म पनि जारी रहेको पाइन्छ। अधिकांशमा तल्लो परेला फरफराउने गरेपनि कसै कसैमा भने माथिल्लो आँखा पनि फरफराउने गर्छ । यसको वास्तविक कारण थाहा नभएपनि सुख्खा आँखा, प्रकाश सवेदनशिल आँखा, तनाव, थकान, क्याफिनको प्रयोग, अल्कोहल, पोषक तत्वको कमी तथा एलर्जी आदिका कारणले आँखा फरफराउँछ । यो कुनै गम्भीर समस्या होइन।
Previous दशैं मनाउँन गएका श्रीमानको शव खोलामा भेटियो, रुदारुदै बेहोस भएर श्रीमतिको मृत्यु
Next विराटनगरको एक मोबाइल पसलमा दोस्रो पटक चोरी
डिप्रेसनबाट बच्नका लागि नियमित सेवन गर्नुहोस् पुदीना, यस्ताे छ यसका अचुक फाइदा ! पुदिना स्वास्थको …